Ahoana ny fanamboarana Bio-gaz fandrahoan-tsakafo?
mardi, 08 mai 2018 08:51
Maro amintsika indrindra ireo manana tokotany malalaka na ny mipetraka hivelan'ny renivohitra indrindra isika any ambanivohitra no afaka mampiasa ny bio-gaz ho solon'ny kitay sy ny saribao na ny afo fandrehitra mba ampiasaina andrahoan-tsakafo. Eny, azo ampiasaina hamanana trano, na hamokarana herin'aratra mihitsy aza raha mitambatambatra ny ao amin'ny fokontany.
Ny tanjona dia ny amadihana ireo poti-kanina, ireo tain'omby, tai-kisoa, pipin'omby sy kisoa, ny tain'akoho sy ny rano avy nanasana tranom-biby samihafa.
Maro ny tsy tia fa ny tain'olona sy ny pipin'olombelona dia azo amokarana tsara bio-gaz izay tsy misy mahasamihafa azy amin'ny an'ny biby.
Raha tsy manana ireo fiompiana ireo, dia ireny ravin-kazo sy tsikafokafona ireny na faikana salady simba ireny dia mety avokoa avadika ho bio-gaz toy ireo fako maro samihafa.
Inona no ilaina ?
Raha tsorina dia arotsaka ao anaty barika misy rano ireo poti-javatra voatanisa ireo ka lo ary mamoaka gaz na fofona hoy isika, toy ireny fofo-pako ireny, na ireny fofona tay ao amin'ny WC vita amin'ny lavaka ireny, tsy inona iny fofona iny fa Méthane na bio-gaz.
Ny tanjona izany dia ny ahafahana mampiditra ireo akora ao anaty rano ary ahafahana misintona ilay gaz ka ho lasa fandrehitra na fanodinana milina hamokarana herin'aratra.
Manamboatra sinibe iray na vita amin'ny vy fotsy na biriky misy ciment tsy mitete, voalalotra tsara, asio secalite, poudre manamafy ciment mba tsy hitete rano, hita eny amin'ny mpivarotra ciment io, ny tsara dia alevina anaty tany, hialana amin'ny fandratrana satria mety mipoaka izy io.
Io sinibe io dia asiana rano atsasany, ka ny gaz vokatra dia hiakatra eo ambonin'ilay rano ka sitonina amin'ny tuyau galva mba tsy ho mora simba, hivoaka aty hivelany.
Sady lasa fitehirizana ny gaz mbola tsy miasa izany ilay sinibe no famadihana ny vokatry ny fahalovan'ireo akora ampidirina anaty rano.
Asiana vavany aty ambany ahafahana mamahana ilay siniben-drano amin'ny alalan'ny fantsona lava. Ny rano lasa ao anatin'io fantsona kely io dia tsy hiakatra ambonin'ny haavon'ny rano ao anaty sinibe izay eo amin'ny atsasany.
Etsy ankilany kosa dia asiana vavany iray analana ireo faikany efa tsy hivadika gaz intsony, ka iny dia azo anaovana zezika bio mamokatra tokoa.
Eto ambonin'ilay sinibe kosa dia asiana tuyau izay tsy manary hivoahan'ny gaz. Asiana hidiny tsara raha sendra misy ny fanapahana azy. Azo asiana fitaovam-pandrefesana toy ny baromètre ahafatarana ny tsindry avoakan'ilay sinibe, ka raha ambany izy dia midika fa mila ampiana ny akora hamokarana ny gaz.
Azo atao isan-tokatrano izy io, nefa afaka mitambatra ihany koa ny fokonolona.
Azo atao ho an'ny kaominina vaventy, ka ny fako sy ny tay ary ny pipi avoakan'ny WC n'ny olona no alaina avadika gaz. Azo ampendehanana bus mandeha amin'ny gaz avy eo, azo anodinana alternateur iray lehibe ka hamokarana jiro hanazava ny lalana sy ny elakelan-trano rehetra.
Tsy mila vola be ny manao azy fa mila finiavana fotsiny ihany ka ampiasa ireo akory ariantsika amin'ny andavan'andro nefa azo haverina amokarana ny filana amin'ny fandrahoantsakafo ho fiarovana ny ala sy ny tontolo iainana ary ampihena ny vola lany.